DOWNLOAD Iris dutu F-3 FSX & P3D - Rikoooo
Munyori: Iris Flight Simulation Software http://www.irissimulations.com.au
Akaruramisa shanduro dutu F.3 kubva Iris Simulation, mitinhimira itsva, rakasungwa VC uye nezvimwe zvinhu zvakawanda (ona readme). Adding afterburner zvinokonzerwa, kwadzakabva nokuda Prepar3D v2 +. Shandisa mabhatani kuti ichibhabhamisa kuti dhipuroya / dzosa ari shanduka geometry mapapiro. Kunopiwa aine vazhinji repaints uye vakagadzirira shanduro nezvombo (mabhomba, zvombo, etc.)
Panavia dutu Adv ndege chinhu British kumberi mapatya-injini interceptor, Panavia dutu uye Bhaibheri. Pamberi March 2011, ndiye dutu Adv akashumira Royal Air Force raiva chikuru achiputa kwakadai murwi.
Iris dutu F-3 FSX & P3D Download
Downloads: 19 873
Downloads: 33 726
Downloads: 18 901
Downloads: 41 702